ကျနော်တို့ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့င့်အဖြစ်, ရောင်းစျေးသတ်မှတ်ကွဲပြားမှုများသင့်ရဲ့ခရီးသွားရက်စွဲများအရသိရသည်, ဒါကြောင့်သင်ရထားလက်မှတ်ကိုချက်ချင်းပဲရရှိနိုင်မှုဖွင့်သည်နှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါလိမ့်မယ်. သင်ကြိုတင်ဝေးလုံလောက်စွာစာအုပ်ဆိုင်လျှင်, သငျသညျအကွောငျးကိုလစာမှရှာနေပါလိမ့်မယ် 92 ဒေါ်လာအသွားအပြန်, သို့မဟုတ်အကြောင်းကို 46 ဒေါ်လာတလမ်း. ပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းနေစျေးနှုန်းများကောင်းကင်ပြာမြင့်မောင်းနိုင်ပါတယ်, ကုန်ကျစရိတ်နီးပါးအကြာတွင်သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ဝယ်ဖို့နှစ်ဆနှင့်အတူ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-amsterdam-direct-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)